ခက်မာ: November 2011 1. 2.
ခရီး (အပိုင်း ၂)
နိုင်ငံတကာကပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ စာရေးဆရာ၊ကဗျာဆရာ ရှစ်ယောက်
နေရောင်ဝင်းဝင်းအောက်မှာမြင်ရတဲ့ Baltimore ကိုတော့ကျမဖျတ်ကနဲကြိုက်လိုက် မိပါရဲ့။ သစ်ပင် တွေကစိမ်းစိမ်း၊ နွေဦးချယ်ရီတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့် လားတော့ မသိ။ နေရောင်ဝင်းဝင်းကလှည့်စားတော့ ကျမကခပ်ပါးပါးအနွေးထည်ကလေးနဲ့ပဲ Baltimore မြို့လည်ဝန်းကျင် လမ်းလျှောက်လှည့် လည်ကြည့်ရှုကြ မယ့် Walking Tour ထဲပူးပေါင်းပါဝင်မိပါတယ်။ အမေရိကရဲ့ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ(immigrant ) အများဆုံးရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေထဲကတမြို့ဖြစ်တဲ့ ဘာလ်တီမိုးရ်က လေတဟူးဟူးတိုက် ပြီးကျမတို့ရဲ့စူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့ခံနိုင်ရည်ကိုစမ်းသပ်ပါတော့တယ်။ ဘာလ်တီမိုးရ်မြို့ခံ
ဖြစ်တဲ့ Charles B. Duff, Developer & planner and great living authority on Baltimore’s architec ture and development ကကျမတို့လမ်းလျှောက်လှည့် လည်မှုခရီးစဉ်ကို ဦး ဆောင်ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ခုနှစ်တွေ၊ကိန်း ဂဏန်းတွေ၊ အဖြစ် အပျက်တွေကိုအလွတ်ရနေတဲ့ ချာလီ ကအင်မတန်စကားပြောကောင်းသူပါ။ Baltimore ရဲ့ အတိတ်အဖြစ်အပျက်တချို့ကိုပြန်ပြောနေတဲ့ သူ့စကားတွေထဲမှာ သူ့မြို့၊ သူ့လူမျိုးနဲ့သူ့ community ကိုအလေး အနက်ထားတဲ့စိတ်ကိုထင်ထင်ရှား ရှားမြင်ရပါတယ်။ ချာလီက ၁၉၆၂ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ လူဖြူလူမည်းခွဲခြားရေး အတွက် ဘာလ်တီမိုးမြို့ အတွင်း မှာဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
Labels: Article, Essay0comments | |
တချိန်က Gettysburg စစ်မြေပြင်မှာ
၂၀၁၁ ဧပြီလမှာ State Depertment ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံအိုင်အိုဝါ တက္ကသိုလ် International Writing Program မှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ဖူးသူနိုင်ငံတကာ စာရေးဆရာတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး Writer-in-Motion ဆိုတဲ့ Study Tour တခုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဖိတ်ကြားခံရပါတယ်။ ခရီးစဉ်ရဲ့ရည် ရွယ်ချက်ကတော့ အမေရိ ကမှာ အကြောင်းပေါင်းစုံနဲ့ပြိုလဲကျဆုံးခဲ့ရမှုတွေနဲ့ပြန်လည် ထူထောင်မှုတွေကိုဆက်စပ်
ဘော့စနီးယား(ဥရောပ)၊ ဂွာတီမာလာ(တောင်အမေရိက)၊ ဂျမေကာ(အာဖရိက)၊ ကင်ညာ (အာဖရိက)၊ ဖိလစ်ပိုင်(အာရှ)၊ သြစတေးလျား၊ ကနေဒါနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျမအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာက စာရေးဆရာ ရှစ်ယောက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် ၀ါရှင်တန်ဒီစီမှာလူစုရပါတယ်။ ဒီစီကမှ ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ထဲက Gettyburg တိုက်ပွဲနယ်မြေကိုပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ်သွားရပါ တယ်။ အဲဒီကမှ ဘာလ်တီမိုးကိုပြန်ဝင်၊ ဘာလ်တီမိုးကနေမှ အမေရိကတိုက်ကိုအနောက်တောင် တည့်တည့်ဖြတ်လို့ တောင်ဖက်စွန်းက နယူးအော်လန်းစ်မှာတထောက်နားကြရပါ တယ်။ အဲဒီနား တ၀ိုက်က ဘာမင်ဟမ်မ်၊ အယ်လ် ဘားမား၊ မော်ဂင်စီးတီး၊ အာချာ ဖလာရာဘေစင်တွေကိုနှစ်ပတ်ကြာလေ့လာပြီး အပြန်လေယာဉ်ခရီးကို ဘဲဥပုံသဏ္ဍန် လမ်းကြောင်းနဲ့ ဗာဂျီးနီးယားမှာလမ်းဆုံးကြပါတယ်။
Labels: Essay0comments | |
(ထုံးစံအတိုင်း အိပ်မရတဲ့တည ဖေ့စ်ဘွတ်ထဲလည်ရင်း ခင်အောင်အေးရဲ့နုတ်စ်
ခေါင်းထဲဖြတ်ကနဲပေါ်လာတာကိုချရေးလိုက်တာပါ။ ဘယ်လိုစမယ်၊ ဘယ်လို ဆုံးမယ်ဆိုတာထည့်မစဉ်းစားပဲ ရေးချင်တာကိုရေးချင်သလိုရေးပြီး ရပ်ချင်တဲ့အချိန် မှာရပ်လိုက်ပါတယ်။)
ကျမကကံဆိုးသူတစ်ယောက်ပါ။ ကာလာလရေကြည်ဘ၀မှာ တောသူဌေးများရဲ့မြေး၊ လူသားကလေးအဖြစ်လောက
ကြီးထဲကိုရောက်လာချိန်မှာတော့ အထည်ကြီးပျက်တို့ရဲ့သွေး။ အသက် ၅နှစ်မှာ
တောမြို့ကလေးကနေ တောစစ်စစ်ဆီရွှေ့ရတယ်။ ၆ နှစ်မှာအဖေနဲ့ဝေးရတယ်။ အသက် ၁၀ နှစ် ၅တန်း ကျောင်းသူအရွယ်မှာ ခုနှစ် မိုင်ဝေးတဲ့ရွာကြီးတစ်ခုကိုအသွား အပြန်တစ်ရက် ၃နာရီလမ်းလျှောက်ပြီး ပညာသင်ရတယ်။ တချို့ရက်တွေမှာ မြို့တော်ကိုနေ့စဉ်ပြေးပြီးရွာစဉ်ဆိုက်တဲ့သင်္ဘောကြီးစီးခွင့်ရရင်တော့ နည်းနည်း သက်သာတယ်။ ဒါပေမယ့်မနက် ၄နာရီဆိုတာမှောင်တုန်း၊ မိနစ် ၂၀လောက် သွားရတဲ့သင်္ဘောဆိပ်ကို တစ်ယောက်ထဲ အမှောင်ထဲမှာ လမ်းလျှောက်သွားရတဲ့ ၁၀ နှစ်သမီးကလေး သနားစရာမကောင်းဘူးလား။
Labels: Essay5comments | |
( နိုင်ငံတကာက စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာများနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Jazz တေးဂီတ၀ိုင်းနဲ့ တွဲဖက်တင်ဆက်တဲ့ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲ Jazz Poetry Concert 2011) မှာ ကျမ ရွတ်ခဲ့တဲ့အက်ဆေးလေးပါ။ ကျမအက်ဆေးကိုစာပေမောင်နှမတော်စပ်တဲ့
မောင်လေးတေဇာ (လရောင်လမ်း) က အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကဗျာရွတ်ပွဲမှာ ကျမက အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းကို မြန်မာလိုတစ်ပိုဒ်နဲ့ပေါင်းစပ်ရွတ်ခဲ့ ပြီး၊ မြန်မာဗားရှင်းကိုတော့ မိတ်ဆွေများကိုဒီနေရာကဝေမျှလိုက်ပါတယ်။)
ဆောင်းကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး နွေဦးမှာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် အလှဆုံးပွင့်ခဲ့တဲ့ချယ်ရီပင်..
သယ်ဆောင်လာခဲ့ပေးသောနွေဦးတခုလွန်မြောက် ခဲ့ပြန်ပြီ။ နှင်းဖွေးဖွေးနှင့်သစ်ကိုင်း
ခြောက်ထီးထီးတွေကြားမှာ တချိန်လုံးလိုလို ငိုချင်ဝမ်းနည်းနေခဲ့ရသောတိတ်ဆိတ် သည့်ဆောင်းပန်းချီ ကိုမေ့လျော့ဖို့ကြိုးစားနိုင်သည့်အင်အားကိုလည်း နွေဦးက သယ်ဆောင်လာပေးခဲ့သည်။ နွေဦးရောက်သည်နှင့်ဆောင်းရာသီမှာအဖြူအမည်း နီးပါးဖြစ်ခဲ့သော လောက၀န်းကျင်တွင်ရောင်စုံလွှမ်းလာပြီ။ ကောင်းကင်ကပြာပြာ။
Labels: Essay 1 comments | |